ॐ उच्चारण गर्दा हुने फाइदा……… !.शेयर गर्नुहोस् – Khabar PatrikaNp
ॐ उच्चारण गर्दा हुने फाइदा……… !.शेयर गर्नुहोस्
August 24, 2020 201
ॐ यस्तो शब्दहो जसको कुनै न कुनै रुपमा सबै धर्म सम्प्रदायहरुमा प्रयोग भएको छ । हिन्दु, बौद्ध, जैन, सिखलगायत अनेक सम्प्रदायमा यस शब्दलाई अवतार पुरुषहरुले उच्च सम्मान दिएका छन् । ॐ शब्द नभएर एक प्रकारको चिन्ह पनि हो ।
भगवानले मनुष्यलाई दिएको अनुपम उपहार मानिन्छ, ॐ । ओमकारबाट नै ब्रह्माजीले अ देखि औसम्मका स्वर र क देखि ह सम्मका व्यंजन, ह्रस्व, दीर्घ आदिले युक्त वर्णमाला बनाएको विश्वास गरिन्छ । जसबाट चार वेदहरु प्रकट भए । यसरी सम्पूर्ण वेद ॐ को विस्तार मात्र हो भन्ने मान्यता छ ।
मानिसले हरबखत ॐ उच्चारण गरे कुनै पनि बाहिरी भय नहुने र बिघ्न हट्ने धार्मिक विश्वास छ । अझ एकाबिहानै उठेर ॐ उच्चारण गर्ने व्यक्तिलाई यसले शान्तिदिने र आनन्दको अनुभव गराउँद छ । ॐ उच्चारणले स्वास्थ्यमा पनि अनेकौ लाभ प्राप्त हुन्छ ।
ॐ उच्चारण गर्दा गलामा कम्पन उत्पन्न हुन्छ जसका कारण मेरुदण्डको हाड प्रभावित हुन्छ । दिनभरि कामगर्ने क्षमता यसबाट बढ्छ । यसले तपाईंलाई सक्रिय राख्ने काम गर्दछ । ॐ को उच्चारण गर्दै प्राणायाम गरेमा कमजोर फोक्सो पनि बलियो भएर जाने र दमको रोगमा समेत लाभ मिल्ने गर्दछ ।
निद्रा नलाग्ने समस्या भएका मानिसले ॐ जपेमा निन्द्रा लाग्दछ । ॐ को उच्चारणले तपाईंको शरीरलाई थकाइ लाग्दैन र शरीरमा स्फुर्ति उत्पन्न हुन्छ । ऊर्जाशील भएर व्यक्ति दिनभरि सक्रिय हुन्छ ।
ॐ उच्चारण गर्दा यसले शरीरमा पाचनक्रिया राम्रो बनाउँछ । मुटु र रक्तप्रवाहलाई पनि यसले राम्रो बनाउँछ । ॐ को जपगर्दा तनाव कमहुने र सोच्ने शक्तिकम हुन्छ ।
Prevअब १४ वर्षभन्दा पुराना मोटरसाइकल चढ्नेले वार्षिक थप ५ प्रतिशत ‘बुढो कर’ तिर्नुपर्ने
Nextकाठमाडौंबाट बैतडी पुगेका प्रहरी जवान र अर्का प्रहरी जवानकी छ महिनाकी छोरीमा कोरोना पुष्टि…
सङ्कटा देबिको दर्शन गर्दै आज: वि.सं.२०७७ साल पौष ११ गते शनिबार को राशिफल हेर्नुहोस, भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस
पाथिभरा माताको दर्शन गरि भोलीको राशिफल हेर्नुहोस : वि.सं.२०७७ साल कार्तिक ०३ गते । सोमबार । ईश्वी सन् २०२० अक्टोबर १९ तारिख
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा पुनः कुलमान घिसिङ
धुमधामसंग विवाह गरेर पैसा कमाउन भन्दै विदेश गए, श्रीमतिलाई ससुरालीले धुमधामसंग फेरी अर्कैसंग विवाह गरिदिए(भिडियो हेर्नुस्)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (33626)
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (33329)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (27297)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (25143)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (22508)
नन्दा सिंह को आखा बाट अन्धकार हट्यो पहिलो चोटि संसार देख्दा खुसिले रोईन (भिडियो हेर्नुहोस) (20087)
नारकीय जीवन बिताउँदै पूर्वलडाकु निर्मला
एका बिहानै आयो दु:खद खबर : जीप दु’र्घ’ट’नामा दुईको मृ’त्यु, सात घा’इ’ते !